မယ်ရီ (စကော့တလန်ဘုရင်မ) - ဝီကီပီးဒီးယား
ဤ ဆောင်းပါးသည် အခြားဘာသာစကားမှ မူကြမ်းသဘောမျိုး ဘာသာပြန်ထားသော ဆောင်းပါးဖြစ်သည်။ ပါဝင်သောအကြောင်းအရာများမှာ ဘာသာနှစ်ခုလုံးကို ကျွမ်းကျင်မှုမရှိသော ကွန်ပျူတာ သို့မဟုတ် ဘာသာပြန်ဆော့ဝဲလ် တမျိုးမျိုးအသုံးပြု၍ ရရှိလာသော အကြောင်းအရာများဖြစ်သည်။ ပြည့်စုံကြွယ်ဝသော ဘာသာပြန်မှုဖြစ်စေရန် ကူညီနိုင်ပါသည်။
Linlithgow Palace, Kingdom of Scotland
၈ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၁၅၈၇(1587-02-08) (အသက် ၄၄)
Fotheringhay Castle, Kingdom of England
Francis II of France (m. ၁၅၅၈; died ၁၅၆၀)
Henry Stuart, Lord Darnley (m. ၁၅၆၅; died ၁၅၆၇)
James Hepburn, 4th Earl of Bothwell (m. ၁၅၆၇; died ၁၅၇၈)
မာရီစတူးဝပ်ထ်အဖြစ်လူသိများသည့် - မာရီမိဘုရားသည် (၈ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅၈၇ - ၈ ဒီဇင်ဘာလ ၁၅၄၂) သ စကော့တလန် ပြည်ကို ၁၄ ဒီဇင်ဘာ ၁၅၄၂ မှ ၂၄ ဇူလိုင် ၁၅၆၇အထိ သိမ်းမြန်းစိုးစံခဲ့သည်။
စကော့တလန် ဘုရင် ဂျိမ်းစ် ၏ တရားဝင်သမီးတော်တစ်ပါးဖြစ်သောမေရီသည်ဖခင်နတ်ရွာစံပြီးနောက်ပလ္လင်တော်သို့ ဆက်ခံ ဝင်ရောက်သည့်အခါ ခြောက်ရက်သား သမီးအရွယ်သာရှိသေးသည်။ စကော့တလန်ကို ဘုရင်ခံ များအုပ်စိုးစဉ်ကသူမသည်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝကိုပြင်သစ်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်ခဲ့ပြီး ၁၅၅၈ တွင် ပြင်သစ်နိုင်ငံရှိဒေါ့ဖင်, ပြင်သစ်ကို လက်ထပ်ခဲ့သည်။ မေရီသည် ၁၅၅၉ ခုနှစ်တွင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး မှစ၍ ဒီဇင်ဘာလ ၁၅၆၀ တွင်သူ့ခင်ပွန်းကွယ်လွန်ချိန်အထိ ပြင်သစ်ဘုရင်မ၏မိဖုရားအဖြစ်ခံယူ ခဲ့သည်။ မုဆိုးမဖြစ်ပြီးမေရီသည် ၁၉ ဩဂုတ်လ ၁၅၆၁ တွင် လေအိသ် သို့ရောက်ရှိလာပြီးစကော့တလန်သို့ပြန်သွားသည်။ လေးနှစ်အကြာတွင်သူမသည်သူမ၏ ဝမ်းကွဲအစ်ကိုဖြစ်သော ဟင်နရီစတူးဝပ်ထ်၊ Lord Darnley နှင့်လက်ထပ်ခဲ့ပြီး ၁၅၆၆ ဇွန်လ တွင်သူတို့တွင် ဂျိမ်းစ်အမည်ရှိ သားတစ်ဦးရရှိလာသည်။
၁၅၆၇ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလတွင်ဒေါန၏နေထိုင်ရာနေရာသည်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ဖျက်ဆီးခံရပြီးဥယျာဉ်တွင်သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရသည်။ Bothwell ၏ ၄ ယောက်မြောက် Earl ဖြစ်သော James Hepburn သည် Darnley သေဆုံးမှုကိုသံသယရှိသူအဖြစ်ယူဆခဲ့ကြသော်လည်း67ပြီလ ၁၅၆၇ တွင်သူသည်စွဲချက်မှလွတ်မြောက်ခဲ့ပြီးနောက်လတွင် Mary နှင့်လက်ထပ်ခဲ့သည်။ ဇနီးမောင်နှံကိုအုံကြွမှုအပြီးတွင်မာရိသည် Loch Leven Castle တွင်ထောင်ကျခဲ့သည်။ ၁၅၆၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၄ ရက်နေ့တွင်သူမသည်တစ်နှစ်အရွယ်သား၏မျက်နှာသာကို စွန့်လွှတ် ခဲ့သည်။ နန်းတော်ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်မအောင်မြင်သည့်ကြိုးပမ်းမှုအပြီးတွင်သူ သည်အင်္ဂလန် ဘုရင်မ အဲလစ်ဇဘက် ၁ မှ ဖယ်ရှားလိုက်သော သူမ၏ ဝမ်းကွဲ ၏ကာကွယ်မှုကိုရှာဖွေရန်တောင်ဘက်သို့ထွက်ပြေးခဲ့သည်။ မာရိကသူမ၏ပိုင်ဆိုင်အဖြစ်တစ်ချိန်ကအဲလစ်ဇဘက်ရဲ့ရာဇပလ္လင်အခိုင်အမာခဲ့ကြောင်းနှင့်အများအပြားအားဖြင့်အင်္ဂလန်၏တရားဝင်အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်အဖြစ်ယူဆခဲ့သည် အင်္ဂလိပ်ကက်သလစ် အဖြစ်လူသိများနေတဲ့ပုန်ကန်မှုအတွက်သင်တန်းသားများကိုအပါအဝင် မြောက်ကိုရီးယား၏ Rising ။ မာရိကိုခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုအဖြစ်ယူမှတ်ပြီးအဲလစ်ဇဘက်သည်သူမ၏အင်္ဂလန်နိုင်ငံရှိရဲတိုက်များနှင့်အိမ်များအတွင်း၌အကျဉ်းချခံထားရသည်။ ၁၈ နှစ်ကြာထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရပြီးနောက်မေရီသည် ၁၅၈၆ ခုနှစ်တွင် Elizabeth လိရှဗက် ကို လုပ်ကြံရန်ကြံစည်မှုဖြင့် အပြစ်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက်နှစ်တွင် ဖာဆိုင်းဟေးရဲတိုက် ၌ခေါင်းဖြတ်သတ်ခဲ့သည်။
၁၅၄၂ ဒီဇင်ဘာ ၈ ရက်တွင်စကော့တလန်၊ Linlithgow နန်းတော် တွင်မေရီကိုဘုရင် ဂျိမ်းစ် V နှင့်သူ၏ဒုတိယမြောက်ဇနီး မာရိတို့မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူမသည်အချိန်မတန်မီမွေးဖွားခဲ့ပြီးဂျိမ်းစ်၏ရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောတရားဝင်ကလေးဖြစ်သည်။  သူမသည် အင်္ဂလန် ဘုရင် ဟင်နရီ (၈) ၏ တူမကြီး ဖြစ်ပြီး သူမ၏အဖေဖြစ်သူ မာဂရက်တီရူ သည်ဟင်နရီ (၈) ၏ညီမဖြစ်သည်။ ၁၄ ရက်မှာ ခြောက်ရက်ပတ်လုံးသူမ၏ကလေးမွေးဖွားပြီးနောက်ဒီဇင်ဘာလ, သူမကဖြစ်လာခဲ့သည် စကော့တလန်ဘုရင်မ သူမ၏ဖခင်သေဆုံးသောအခါဖြစ်ကောင်းအောက်ပါတစ်ဦးနှောက်အာရုံကြောပြိုကျများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအနေဖြင့်, Solway မော့စ်၏တိုက်ပွဲ  သို့မဟုတ်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုအပေါ်နေချိန်မှာပိုးသောက်ရေကနေ။ 
John Knox မှပထမဆုံးမှတ်တမ်းတင်ထားသောလူကြိုက်များသောဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်တွင်ဂျိမ်းစ်သည်သူ၏သေခါနီးတွင်သူ့ဇနီးသမီးတစ်ယောက်မွေးဖွားခဲ့သည်ဟုကြားသိရသောအခါသူက“ ဒါဟာ cam cam wi 'lass cam and wass' lass gang!” သူ၏ စတူးဝပ် (House of Stuart) သည် ၁၄ ရာစုတွင် ရောဘတ် ဘရုစ် ၏သမီး မာဂျိုရီဘရုစ် နှင့်စကော့တလန်၏ ၆ အဆင့်မြင့်ဘဏ္ew ာရေး ၀ န်ကြီး Walter Stewart နှင့် လက်ထပ်ပြီး ၁၄ ရာစုတွင်စကော့တလန်၏ရာဇပလ္လင်ကိုရရှိခဲ့သည်။ ပန်း ဦး ရစ်သရဖူသည်သူ့မိသားစုသို့အမျိုးသမီးမှတစ်ဆင့်ရောက်ရှိလာပြီးသူ၏မိသားစုမှအမျိုးသမီးတစ် ဦး မှတစ်ဆင့်ပျောက်ဆုံးသွားလိမ့်မည်။ ဤဒဏ္aryာရီဖော်ပြချက်သည်နောက်ပိုင်းတွင်မာရိမှမဟုတ်ဘဲသူမ၏သားစဉ်မြေးဆက် ဗြိတိန်ဘုရင်မ မှတစ်ဆင့်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ 
မေရီသည်မွေးဖွားပြီးမကြာမီအနီးရှိ စိန့်မိုက်ကယ်ချာ့ချ် တွင်ခရစ်စမတ်ဘာသာကိုခံယူခဲ့သည်။  ကောလာဟလများသူမကအားနည်းခဲ့ကြောင်းပြန့်ပွားခြင်းနှင့်ပိုငျးအခွားကို၎င်းငျး,  ပေမယ့်အင်္ဂလိပ်သံတမန်, Ralph Sadler ငါ၏ငါမြင်ပြီကြောင့်င့်တယ်သောကလေးတစ်ဦးကဲ့သို့ဖြစ်၏ "သူမ၏သူနာပြုခြင်းဖြင့်ပြသရန်, မတ်လ 1543 ခုနှစ် Linlithgow နန်းတော်မှာမွေးကင်းစကလေးမြင်လျှင်, ရေးသားခဲ့သည် သူမ၏အသက်အရွယ်နှင့်အသက်ရှင်ရန်ကြိုက်သကဲ့သို့။ " 
နန်းတော်ကိုအမွေဆက်ခံသည့်အချိန်တွင်မာရိသည်မွေးကင်းစအရွယ်တွင်စကော့တလန်ကိုအရွယ်ရောက်သူဖြစ်လာသည်အထိ အုပ်ချုပ်သူများ က အုပ်ချုပ် ခဲ့သည်။ အစကတည်းကပင်ရီဂင်နစ်စ်အားတောင်းဆိုမှုနှစ်ခုရှိသည် - တစ်ခုမှာ ကက်သလစ် Cardinal Beaton မှဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခုမှာပလ္လင်တော်၏နောက်တွင်ရပ်နေသူ Arran of Protestant Earl မှ ဖြစ်သည်။ ဘီတိုတန်၏ပြောဆိုချက်သည်သူ၏အတိုက်အခံများကိုအတုအဖြစ်ပယ်ချလိုက်သောဘုရင့် အလိုတော် ကို အခြေခံ၍ ဖြစ်သည်။ Arran သည်သူ၏သူငယ်ချင်းများနှင့်ဆက်ဆံရေး၏ပံ့ပိုးမှုဖြင့်မေရီ၏မိခင်သည် ၁၅၅၄ ခုနှစ်အထိပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းခံရသည်။ 
1553 ၏ ရွှေဒင်္ဂါး : obverse, စကော့တလန်၏လက်နက် ။ ပြောင်းပြန် တော်ဝင် monogram
အင်္ဂလန်ဘုရင်ဟင်နရီ (၈) သည်စကော့တလန်နှင့်အင်္ဂလန်ပြည်ထောင်စုကိုထူထောင်ရန်မျှော်လင့်သောမာရိနှင့်သူ့သားနှင့်အမွေဆက်ခံသူ အက်ဒွပ် တို့လက်ထပ်ထိမ်းမြားရန်အခွင့်အလမ်းယူခဲ့သည်။ ၁၅၄၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့တွင်မေရီသည်ခြောက်လသားအရွယ်တွင် ဂရင်းနစ် ၀ ိညာဉ်စာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ အသက် ၁၀ နှစ်တွင်မာရိသည်အက်ဒွပ်ကိုလက်ထပ်ထိမ်းမြားပြီးအင်္ဂလန်သို့ပြောင်းရွှေ့မည်ဖြစ်ပြီးဟင်နရီသည်သူ၏ကြီးပြင်းမှုကိုကြီးကြပ်နိုင်သည်။  စာချုပ်အရနှစ်နိုင်ငံသည်တရားဝင်သီးခြားစီရှိနေပြီး၊ စုံတွဲသည်ကလေးမွေးဖွားရန်ပျက်ကွက်ပါကယာယီပြည်ထောင်စုဖျက်သိမ်းလိမ့်မည်။  Cardinal Beaton သည်အာဏာပြန်ရလာသည်နှင့်ပြင်သစ်လိုလားသူအားထောက်ခံသည့်အစီအစဉ်ကိုစတင်ခဲ့သည်။ ပြင်သစ်နှင့်မဟာမိတ်ဖွဲ့ မှုကိုဆန့်ကျင်လိုသည့်ဟင်နရီကိုဒေါသထွက်ခဲ့သည်။  Beaton သည် Mary ကိုကမ်းရိုးတန်းမှ Stirling Castle ၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုသို့ပြောင်းရွှေ့လိုသည်။ Regent Arran ကတော့ဒီအပြုအမူကိုခုခံတွန်းလှန်ခဲ့ပေမယ့် Beaton ရဲ့လက်နက်ကိုင်ထောက်ခံသူတွေ Linlithgow မှာစုရုံးတဲ့အခါမှာသူကနောက်ဆုတ်သွားခဲ့ပါတယ်။  Lennox ၏ Earl သည် Mary နှင့်သူမ၏မိခင်ကို ၁၅၄၃၊ ဇူလိုင် ၂၇ ရက်နေ့တွင်လက်နက်ကိုင်ယောက်ျား ၃၅၀၀ နှင့်အတူ Stirling သို့ခေါ်ဆောင်ခဲ့သည်။  Ralph Sadler နှင့် Henry Ray တို့၏ဖော်ပြချက်အရမာရိသည်ရဲတိုက်၌ရှိသောဘုရားရှိခိုးကျောင်းတွင် ၁၅၄၃ စက်တင်ဘာ ၉ ရက်  ကို“ သူတို့တိုင်းပြည်တွင်အသုံးပြုခြင်းကဲ့သို့သောအခမ်းအနားများ” ဖြင့် သရဖူဆောင်း ခဲ့သည်။ 
မာရိကိုမရောနှောမီလေးတွင်ဟင်နရီသည်စကော့တလန်ကုန်သည်များအားပြင်သစ်သို့ ဦး တည်။ ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးသူတို့၏ကုန်ပစ္စည်းများကိုခိုးယူခဲ့သည်။ ဖမ်းဆီးမှုများကိုစကော့တလန်တွင်ဒေါသဖြစ်စေခဲ့ပြီးအာရာရန်သည်ဘီတိုတန်နှင့်ပူးပေါင်းကာကက်သလစ်ဘာသာဝင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။  Greenwich စာချုပ်ကို စကော့တလန်ပါလီမန်က ဒီဇင်ဘာလတွင်ပယ်ချခဲ့သည်။  လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်ကိုငြင်းပယ်ခြင်းနှင့်ပြင်သစ်နှင့်စကော့တလန်တို့အကြားမဟာမိတ်ဖွဲ့ခြင်းအားပြန်လည်စတင်ခြင်းကဟင်နရီ၏ " Rough Wooing " သည်မာရိအားသူ့သားနှင့်လက်ထပ်ထိမ်းမြားရန်ရည်ရွယ်သည့်စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ အင်္ဂလိပ်တပ်ဖွဲ့များသည်စကော့တလန်နှင့်ပြင်သစ်နယ်မြေများတွင်စီးနင်းမှုများကိုစီးနင်းခဲ့သည်။  မေလ ၁၅၄၄ တွင်အင်္ဂလိပ် ၏ Earl Hertford (နောက်ပိုင်းတွင် Duke of Somerset ) သည် Edinburgh ကို ၀ င်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးစကော့တလန်များသည် Mary အား Dunkeld သို့လုံခြုံမှုရှိစေရန်ခေါ်ဆောင်သွားသည်။ 
မေလ 1546 ခုနှစ်, Beaton ပရိုတက်စသဖြင့်သတ်ပစ်ခဲ့ခြင်း lairds,  နှင့်စက်တင်ဘာ 10 1547 ရက်တွင်ကိုးလအဋ္ဌမမြောက်ဟင်နရီ၏သေသောနောက်, စကော့မှာလေးလံသောရှုံးနိမ့်ခံစားခဲ့ရ Pinkie Cleugh ၏တိုက်ပွဲ ။ သူမ၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုကြောက်ရွံ့သောမာရိ၏အုပ်ထိန်းသူများကသူမအားသုံးပတ်မျှမက Inchmahome Priory သို့စေလွှတ်။ ပြင်သစ်သို့အကူအညီတောင်းခဲ့သည်။ 
ပြင်သစ် ဘုရင် ဟင်နရီ ၂ သည် မိဖုရားငယ်လေးအားသူ၏သုံးနှစ်သား Dauphin Francis နှင့်လက်ထပ်ခြင်းအားဖြင့်ပြင်သစ်နှင့်စကော့တလန်ကိုစည်းလုံးရန်အဆိုပြုခဲ့သည်။ ပြင်သစ်စစ်တပ်၏အကူအညီနှင့်ကတိတော်များကိုသူကိုယ်တိုင်ရရန် Arran သည်လက်ထပ်ရန်သဘောတူခဲ့သည်။  ၁၅၄၈၊ ဖေဖော်ဝါရီလတွင်မာရိသည်သူ၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအတွက် Dumbarton Castle သို့ပြောင်းရွှေ့ခံခဲ့ရသည်။  အင်္ဂလိပ်တို့ကသူတို့နောက်ကိုနောက်ကျကျန်ရစ်ခဲ့ပြီးမဟာဗျူဟာမြောက်မြို့ ဟတ်တန်တန် ကိုသိမ်းယူခဲ့သည်။ ဇွန်လတွင်စောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသောများစွာသောပြင်သစ်အကူအညီသည် လေအိသ် သို့ ၀ င်ရောက်ပြီး နောက်ဆုံးတွင် Haddington ကိုယူဆောင်လာသည်။ ၁၅၄၈ ခုနှစ်ဇူလိုင်လ ၇ ရက်နေ့တွင်မြို့အနီးရှိစင်္ကာပူတွင်ကျင်းပသောစကော့တလန်ပါလီမန် သည်ပြင်သစ်လက်ထပ်မှုစာချုပ်ကိုသဘောတူ ခဲ့သည်။ 
သူမ၏လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်ရှိပြီးဖြစ်သောငါးနှစ်အရွယ်မာရိသည်နောက် ၁၃ နှစ်တွင်ပြင်သစ်နိုင်ငံတရားရုံးတွင်နေထိုင်ရန်ပြင်သစ်နိုင်ငံသို့စေလွှတ်ခြင်းခံရသည်။ Nicolas de Villegagnon ကညွှန်ကြားသော Henry II မှစေလွှတ်သောပြင်သစ်ရေတပ်သည်ဩဂုတ်လ ၇ ရက်တွင် Dumbarton မှ Mary နှင့်အတူရွက်လွှင့်ခဲ့ပြီးတစ်ပတ်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောနောက်မှ Brittany ရှိ Roscoff သို့မဟုတ် Saint-Pol-de-Léon သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။
စကော့တလန်ရှိအမြင့်မြတ်ဆုံးမိသားစုတချို့၏သမီးများဖြစ်သော Beaton, Seton, Fleming တို့ နှင့်အတူ Mary ကိုတရားရုံးမှတရား ၀ င်ဖကွဲညီနှစ် ဦး နှင့် Mary Mary လေးယောက် (သူမ၏ကိုယ်ပိုင်အသက်အရွယ်မိန်းကလေးလေးယောက်၊ မေရီအမည်ရှိ) အပါအဝင်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်တရားရုံးနှင့်အတူလိုက်ပါခဲ့သည် နှင့် Livingston ။  Janet, Mary Fleming ၏မိခင်နှင့် James V ၏အစ်မဖြစ်သူ Lady Fleming ကို governess အဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့သည်။  သမ္မတကတော်ဖလင်မင်းသည် ၁၅၅၁ ခုနှစ်တွင်ပြင်သစ်မှထွက်ခွာသွားသောအခါသူသည်ပြင်သစ်အစိုးရဖြစ်သည့် Françoise de Paroy ၏အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သည်။
မာရိနဲ့ Francis က အတွက် ကက်သရင်းက de '' Medici 's နာရီစာအုပ်, c. 1558 ။ Bibliothèque nationale de France, Paris ။
(ခေတ်ပြိုင်မှတ်တမ်းများအရ) မာရိသည်လှပပြီးလိမ္မာပါးနပ်သောမာရိသည်ကလေးဘဝတွင်အလားအလာကောင်းရှိသည်။  ပြင်သစ်တရားရုံးတွင်ဟင်နရီ ၂ ၏ဇနီး ကက်သရင်းဒီ 'မက်ဒီချီ မှအပသူမသည်လူတိုင်းအတွက်အကြိုက်ဆုံးဖြစ်သည်။  မာရိသညျကစားရန်သင်ယူ တယော နဲ့ Virgin, စကားပြေ, ကဗျာ, horsemanship, falconry နှင့်ခြယ်လှယ်အတွက်အရည်အချင်းကြီးနှင့်ပြင်သစ်, အီတလီ, သှနျသငျခဲ့သညျ လကျတငျအ, စပိနျနှင့် ဂရိ သူမ၏ဇာတိစကားပြောအပြင်, စကော့ ။  သူမ၏အနာဂတ်ယောက္ခမဖြစ်သူ Valois မှ is လိရှဗက်သည် မာရိသည်နောက်ပိုင်းဘဝ၌လွမ်းဆွတ်ဖွယ်အမှတ်တရများကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည့်ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေဖြစ်လာခဲ့သည်။  မာရိရဲ့မိခင်အဖွား, Antoinette က de Bourbon, သူမ၏ငယ်စဉ်ကလေးဘဝအပေါ်အခြားအားကောင်းတဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုခဲ့  နှင့်သူမ၏ကျောင်းအုပ်ကြီးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့သည်။ 
မာရိပုံတူတွင်သူမမှာဘဲဥပုံပုံသဏ္headာန်ရှိသောခေါင်းတစ်လုံး၊ ရှည်လျားပြီးလှပသောလည်ပင်း၊ တောက်ပသောအပြာဆံပင်၊ အညိုရောင်မျက်လုံးများသည်အလွန်ပါးလွှာသောမျက်ခွံများနှင့်ပါးနပ်စွာခုတ်ထွင်ထားသောအရောင်များ၊ ချောချောမွေ့သောအသားအရေ၊ ကုမ္ပဏီအသွင်အပြင်။ သူမသည်လှပသောကလေးတစ် ဦး အဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။  သူမ၏နို့စို့အရွယ်သို့မဟုတ်ကလေးဘဝတစ်ချိန်ချိန်တွင်သူသည် ကျောက်ရောဂါကူးစက် ခဲ့သော်လည်းသူမ၏အင်္ဂါရပ်များကိုမမှတ်ပါ။ 
ခေတ်သစ်စံချိန်စံညွှန်းများအရမေရီသည်အဟောအပြောကောင်းသူ၊ အထူးသဖြင့်အရပ်ရှည်ရှည် (သူမသည်အရွယ်ရောက်သူ5ဦး အထိရှိခဲ့သည်5 ) ဟင်နရီ II ကိုရဲ့သားနဲ့အမွေဆက်ခံသူ, Francis က, stuttered နှင့်ပုံမှန်မဟုတ်တိုတောင်းခဲ့ပါတယ်နေစဉ်။ ဟင်နရီကမှတ်ချက်ချသည်မှာ - "သူတို့တွေ့ဆုံတဲ့နေ့ကစပြီးကျွန်မနဲ့ကျွန်မသားနှစ်ယောက်ဟာတစ် ဦး နဲ့တစ် ဦး သိကျွမ်းလာကြသလိုအတူတကွအတူတူနေခဲ့ကြတာပါ"  ၁၅၅၈ ခုနှစ်Aprilပြီလ ၄ ရက်နေ့တွင်မာရိသည်စကော့တလန်နှင့်အင်္ဂလန်သို့တိုင်ကြားစာကိုပြissueနာမရှိဘဲသေဆုံးသွားပါကလက်မှတ်ရေးထိုးသည့်လျှို့ဝှက်စာချုပ်တစ်ခုကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။  ရက်ပေါင်း ၂၀ အကြာတွင်သူသည် Dauphin ကို Notre Dame de Paris တွင်လက်ထပ်ခဲ့ပြီးသူသည်စကော့တလန်ဘုရင်၏မိတ်ဖက်ဖြစ်လာခဲ့သည်။
မာရီယာသည်စကော့တလန်ဘုရင်မနှင့်ပြင်သစ်ဘုရင်အဖြစ်အင်္ဂလန်၏လက်များနှင့်ပေါင်းပြီး ၁၅၆၀ အက်ဒ်ဘာ့ဂ်စာချုပ် မတိုင်မီပြင်သစ်တွင်အသုံးပြုခဲ့သည်။
၁၅၅၈၊ နိုဝင်ဘာလတွင် ဟင်နရီ (၈ ) ၏သမီးကြီး ဖြစ်သောအင်္ဂလန်မှမေရီ (၁) သည်သူမ၏ကျန်ရှိနေသောတစ် ဦး တည်းသောမွေးချင်း အဲလစ်ဇဘက် (I) အားဆက်ခံခဲ့သည်။ ၁၅၄၃ ခုနှစ်တွင် အင်္ဂလန်ပါလီမန် မှ တတိယအကြိမ်ဆက်ခံခြင်းအက်ဥပဒေအရ အဲလစ်ဇဘက်သည်သူမ၏အစ်မအမွေဆက်ခံသူအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခံရပြီးဟင်နရီ ၈ ၏ နောက်ဆုံးအလိုတော်နှင့်သေတမ်းစာ ကစတူးဝပ်များကိုအင်္ဂလိပ်ရာဇပလ္လင်အားဆက်ခံခြင်းမှဖယ်ထုတ်လိုက်သည်။ သို့သော်ကက်သလစ်များစွာ၏အမြင်တွင်အဲလစ်ဇဘက်သည်တရားမဝင်သောကြောင့်အင်္ဂလန်ဘုရင်မဖြစ်သောမေရီစတူးတာကိုအဘွား မာဂရီး တူး ဒေါ့ မှတစ်ဆင့်တရားဝင်ဆက်လက်ဆင်းသက်လာသော ဟင်နရီ VII ၏တရားဝင်သားစဉ်မြေးဆက်ဖြစ်လာသည်။  ပြင်သစ်ဘုရင် Henry II ကိုမိမိအသားကြီးနှင့်အင်္ဂလန်၏သမီး-In-ဥပဒရှင်ဘုရင်နှင့်မိဖုရားကြွေးကြော်နှင့်ပြင်သစ်အတွက် အင်္ဂလန်၏တော်ဝင်လက်နက် ခဲ့ကြသည် quartered Francis ကများနှင့်မာရိ၏သူတို့နှင့်အတူ။  အင်္ဂလိပ်ဘုရင်အဖြစ်မာရိပြောဆိုခြင်းသည်သူမနှင့် Elizabeth လိရှဗက်အကြားနှစ်ရှည်လများကပ်လျက် ရှိသည်။ 
ဟင်နရီ II ကိုတစ်ဦးအတွက်ထောက်ဒဏ်ရာကနေ, 10 ဇူလိုင် 1559 ပေါ်တွင်အသေခံလိုက်တဲ့အခါ joust, တဆယ်နှစ်အရွယ် Francis ကခြောက်ထောင်နှစ်အရွယ်မာရိသည်ပြင်သစ်၏ရှင်ဘုရင်နှင့်မိဖုရားဖြစ်လာသည်။  ဘုရင်မကြီးရဲ့အလေးများနှဈယောကျ, အ သောအသွင်၏ Duke နှင့် Lorraine ၏ Cardinal, ပြင်သစ်နိုင်ငံရေးတွင်ယခုကြီးစိုးခဲ့ကြသည်  la စိုးမိုးမှု Guisienne အချို့သမိုင်းပညာရှင်တို့ကခေါ် Ascend ခံစား။
စကော့တလန်မှာပရိုတက်စတ၏တနျခိုး အသင်းတော်၏အရှင်သခင် သာပြင်သစ်တပ်တွေ၏အသုံးပြုမှုမှတဆင့်ထိရောက်သောထိန်းချုပ်မှုထိန်းသိမ်းထားသောမာရိရဲ့မိခင်များ၏ကုန်ကျစရိတ်မှာမြင့်တက်ခဲ့သည်။  ပရိုတက်စတင့် Lords များသည်ပရိုတက်စတင့်ဝါဒကိုကာကွယ်ရန် အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်များကိုစကော့တလန်သို့ဖိတ်ကြားခဲ့သည်။ ပြင်သစ်တွင် Huguenot လူထုအုံကြွမှုသည် Tumult of Amboise ဟုခေါ်သည့် ၁၅၆၀ မတ်လတွင်ပြင်သစ်တို့ကနောက်ထပ်အထောက်အပံ့များပေးပို့ရန်မဖြစ်နိုင်ခဲ့ပေ။  အဲဒီအစား Guise ညီအစ်ကိုတွေကအခြေချညှိနှိုင်းဖို့သံအမတ်တွေကိုလွှတ်လိုက်တယ်။  ၁၅၆၀၊ ဇွန် ၁၁ ရက်တွင်သူတို့၏ညီမ (မာရိ၏မိခင်) ကွယ်လွန်သွားသဖြင့်အနာဂတ်ဖရန်ကို - စကော့ဆက်ဆံရေးနှင့်ပတ်သက်သောမေးခွန်းမှာအရေးတကြီးကိစ္စဖြစ်သည်။ 1560 ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့တွင်မာရိ၏ကိုယ်စားလှယ်များကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည့် Edinburgh စာချုပ်ပါ စည်းကမ်းချက်များအရပြင်သစ်နှင့်အင်္ဂလန်တို့ကစကော့တလန်မှတပ်များရုပ်သိမ်းရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပြီး Elizabeth လိရှဗက်သည်အင်္ဂလန်ကိုအုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုအသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။ သို့သော် ၁၇ နှစ်အရွယ်ပြင်သစ်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်ဆဲမိခင်ဖြစ်သူအတွက်ဝမ်းနည်းပူဆွေးနေသည့်မေရီသည်စာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးရန်ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ 
↑ Bishop John Lesley said Mary was born on the 7th, but Mary and John Knox claimed the 8th, which was the feast day of the Immaculate Conception of the Virgin Mary (Fraser 1994, p. 13; Wormald 1988, p. 11).
↑ While Catholic Europe switched to the New Style Gregorian calendar in the 1580s, England and Scotland retained the Old Style Julian calendar until 1752. In this article, dates before 1752 are Old Style, with the exception that years are assumed to start on 1 January rather than 25 March.
↑ Also spelled as Marie and as Steuart or Stewart
↑ Fraser 1994
↑ Fraser 1994; Wormald 1988
↑ Guy 2004
↑ Fraser 1994; Guy 2004
↑ Sadler to Henry VIII, 23 March 1543, quoted in Clifford 1809; Fraser 1994; Guy 2004; Wormald 1988
↑ Fraser 1994; Guy 2004; Wormald 1988
↑ Fraser 1994; Weir 2008; Wormald 1988
↑ Fraser 1994; Weir 2008
↑ Fraser 1994; Guy 2004; Weir 2008
↑ Sadler to Henry VIII, 11 September 1543, quoted in Clifford 1809; Fraser 1994
↑ Wormald 1988
↑ Weir 2008
↑ Guy 2004; Wormald 1988
↑ Weir 2008; Wormald 1988; Catherine's dislike of Mary became apparent only after Henry II's death (Fraser 1994; Guy 2004). Catherine's interests competed with those of the Guise family, and there may have been an element of jealousy or rivalry between the two queens (Donaldson 1974; Fraser 1994).
↑ Guy 2004; Weir 2008; Wormald 1988
↑ Fraser 1994; Guy 2004; Weir 2008; Wormald 1988
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မယ်ရီ_(စကော့တလန်ဘုရင်မ)&oldid=719106" မှ ရယူရန်
ဘာသာပြန်ပြီး စိစစ်ရှင်းလင်းရန်လိုအပ်သော ဆောင်းပါးများ
အခြားဘာသာစကားမှ ဘာသာပြန်ထားပြီး ရှင်းလင်းရန် လိုအပ်သော ဝီကီပီးဒီးယား ဆောင်းပါးများ
ပြန်လည်မဆန်းစစ်ရသေးသော ဘာသာပြန်များနှင့် စာမျက်နှာများ
ဤစာမျက်နှာကို ၁၃ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၂၀:၁၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။